VA - Bo Bo Music Production 3rd Year Records [2013 Album] [Disc 2] - Mg Shan Lay
Home Album Various Artists X Box ကိကိ ထက်ယံ နီနီခင်ဇော် ပိုပို လွှမ်းပိုင် ကျော်ထွဋ်ဆွေ ဂျောက်ဂျက် VA - Bo Bo Music Production 3rd Year Records [2013 Album] [Disc 2]
VA - Bo Bo Music Production 3rd Year Records [2013 Album] [Disc 2]
12:27:00 PM Album, Various Artists, X Box, ကိကိ, ထက်ယံ, နီနီခင်ဇော်, ပိုပို, လွှမ်းပိုင်, ကျော်ထွဋ်ဆွေ, ဂျောက်ဂျက်,
1. ငါတို့ဝေး - လွှမ်းပိုင်
2. နင်မသိပါဘူး - နီနီခင်ဇော်
3. I Will Go - X Box & မောင်သီဟ ၊ စုစန္ဒီထွန်း
4. Sorry Baby - သားကြီး ၊ လူုခေတ်
5. နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက် - ကိကိ ၊ ASH ၊ မိစန္ဒီ
6. ကမ္ဘာကြီးပြိုလဲ - ဘဒ္ဒ
7. Letter Of My Ex - ဂျောက်ဂျက် ၊ Glock
8. ရုပ်ဆိုးမလေး - သားသား
9. မင်းနဲ့အတူ - ထက်ယံ
10. သရေပွဲ - ပိုပို
11. ချစ်တတ်ခဲ့ပြီ - မှုံကြီး
12. သို့ . . .ဘဲရှိသောမိန်းမများ - ကျော်ထွဋ်ဆွေ
13. အချစ် = ရူးသွပ်ခြင်း - မျိုးထက်လူ
14. တစ်နေ့လုံး တစ်ညလုံး - သားစိုး ၊ ဥဂ္ဂါ
15. ရွာပါမိုး - စိုးကြီး ၊ စည်သူနှင်းမိုး ၊ JR Soe ၊ Oak Soe
16. အချစ်ကြောင့်ရူး - မဲလေး
17. ဆန့်ကျင်ဘက်ချစ်သူ - Survivor
18. ပြန်ဆုံချင်တယ် - Ta Za MC ၊ ပစောက်
19. Girlfriend - X-Glaz
Tags # Album # Various Artists # X Box # ကိကိ # ထက်ယံ # နီနီခင်ဇော် # ပိုပို # လွှမ်းပိုင် # ကျော်ထွဋ်ဆွေ # ဂျောက်ဂျက်
Labels: Album, Various Artists, X Box, ကိကိ, ထက်ယံ, နီနီခင်ဇော်, ပိုပို, လွှမ်းပိုင်, ကျော်ထွဋ်ဆွေ, ဂျောက်ဂျက်